US - indlela ukuhlola izitho zangaphakathi, okusekelwe of the ukubuya umzimba ukuba amasignali ultrasound isikeni. Ngo ukusetshenziswa scanner yesimanje, le ndlela kuyinto eyodwa yezindlela olunembile kakhulu futhi ulwazi zokuxilonga.
Uma ukhumbula physics esikoleni esiphakeme, kuba sobala ukuthi amagagasi ultrasonic komtshina ukusakaza emoyeni futhi ngesikhathi esifanayo kakhulu bahlakazeka. Kodwa amanzi, kunalokho, kuyinto imvelo ekahle ukusabalala lolu hlobo ngemisebe. Ngakho-ke, ekulungiseleleni US, njengoba umthetho, kuba emisebenzini ukuthi balahle khona igesi futhi emoyeni endaweni yomzimba iyahlolwa. Ngokwesibonelo, ngesikhathi sitholakele isimo kwesinye, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi uHamani wagcwala kakhulu. Ngakho, kunemithetho ethile, ukuqaliswa ozoqinisekisa Imiphumela olunembile ngesikhathi ultrasound.
Ngakho, ukulungiselela US iziphathimandla, okuyinto zitholakala ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu, kweyame ukudla ukudla okuthile. Ezinsukwini ezintathu ngaphambi kosuku cwaningo kumele zisuswe ukudla kwabo ekudleni efana izithelo nemifino, ubisi, isinkwa abamnyama. Ngesikhathi esifanayo ufuna ukuqala ukuwamukela amaphilisi namalahle yasebenza (2-4 izicucu), noma ukuthatha izidakamizwa "Espumizan" njengoba uchazwe kule imiyalelo izidakamizwa. Uma imakwe iziyaluyalu wokugaya ukudla (ezifana ukuqunjelwa), kungenzeka ukuthi udokotela imithi yokwamukela "zemikhosi" izidakamizwa. Nokho, le nkinga okumele kubhekwane nayo kuba udokotela. Ezinsukwini ezimbili ukwenza enema ukuhlanzwa. Nakani! Kwaba izinsuku ezimbili ngaphambi inqubo, kunokuba ngayizolo.
Uma inqubo ultrasound kuhlelelwe ekuseni, esidlweni sokugcina ngaphambi kokuba kumele kwenzeke ngaphambi 19 amahora ngosuku odlule. Kuleso simo, uma reception ngesikhathi udokotela esimisiwe sokuba nengxenye ngosuku lwesibili, sekuyisikhathi sokugcina udinga amahora ayishumi ngaphambi inqubo.
Uma ukuhlolwa kwezitho, okuyinto zitholakala ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu, kuhlanganise nencazelo isimo imisebenzi gallbladder, ukulungiselela US kwenziwe ngendlela efanayo. Umahluko owokuthi ukuthi inqubo udinga ukuthatha nge 200 ml ukhilimu nge 10% amafutha noma yogurt pint (3.2% fat). Kulabo abangakwazi ukubekezelela imikhiqizo yobisi, kungenzeka ukuba esikhundleni saso kungene anesikhupha ezimbili fresh amaqanda.
Ukulungiselela i-ultrasound kwezitho okhalo, esiqhutshwa kwabesifazane transvaginal futhi amadoda transrectal, siwukuba aziphathe a enema ukuhlanzwa, elenziwe ngobusuku ngaphambi kwesifundo. Ngaphambi inqubo kufanele ukuya ethoyilethi ukuba athululele esinyeni. Wena ungadla uphuze njengenjwayelo.
Uma scan okhalo kuzokwenziwa transabdominal, okuwukuthi, kusetshenziswa odongeni lesisu, belungiselela US kanje. Kwaphela isigamu sehora ngaphambi kwesikhathi esihleliwe inqubo kuyadingeka ukuze baphuze cishe amalitha kwesigamu noma yiluphi uketshezi. Ngenxa yalesi cwaningo, kubalulekile ukuthi isinye yagcwala ngangokunokwenzeka. Uma nesifiso sokwenza lo mkhuba siba nzima kodwa wazibekezelela, futhi ngesikhathi US ayikafiki, avunyelwe uvakashele yangasese ukuze nginciphise ukucindezeleka okweqile. Kodwa ke uphinde ujabulele ethile ketshezi, ukuze kuthi lapho ukuziphatha ukugcwaliswa scan kwesinye lenziwe laba likhulu.
Ngendlela efanayo njengoba kuchaziwe ngenhla, kufanele alungele uphethwe ultrasound esinyeni eliyifa.
Phakathi nenkathi yokukhulelwa, le ultrasound wenziwa ngaphansi ngokulinganisela esinyeni ukugcwaliswa, ngakho belungiselela inqubo itholakala lokuthi ukuthi ihora ngaphambi kwesikhathi esimisiwe ukuphuza isigamu ilitha liquid.
It uhlala ukutshela indlela yokulungiselela ultrasound kwezinso. Kulokhu, kutuswa ukuba balandele imithetho anconywe izifundo esiswini. Okungukuthi, kubalulekile ukuba sithathe izinyathelo luzoncipha lokuhlushwa amagesi emathunjini. cwaningo sezinso awuzange eyenziwa esiswini esingenalutho, ngakho ukushintsha ukudla ukuphuza umbuso ngaphambi inqubo akudingekile.
Ungaluthola kuphi incwadi kadokotela ukufaka esikhundleni izincwadi zokushayela? isitifiketi yokushayela wezokwelapha we isampula entsha
Ngenxa abazali at the wedding: kungani kunesidingo
Kungani walithanda Onegin Tatyana Larina?